Antigua neBarbuda Inotangisa Yekupedzisira "Yako Nzvimbo Muzuva" Sweepstakes
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau » Antigua neBarbuda Inotangisa Yekupedzisira "Yako Nzvimbo Muzuva" Sweepstakes
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo Antigua neBarbuda Tourism Authority iri kuunza mufaro kune vanofamba-famba vafambi mukati menguva yezororo, nekuvapa iwo mukana wekuhwina kutiza kwavanofanirwa muAntigua neBarbuda kwe2021.
Kune vafambi vanotarisira kumberi imwe nzvimbo, uye shanduko yenzvimbo mugore idzva, Antigua neBarbuda inzvimbo yako muzuva. Iine mazana matatu nemakumi matatu nemakumi mashanu emahombekombe, emahombekombe emahombekombe emahombekombe egungwa anogamuchira mhepo yeCaribbean, uye nzvimbo zhinji dzakavhurika, mapatya-chitsuwa paradhiso akakwana kureba.
Iyo 'Yako Nzvimbo Muzuva' Sweepstakes inopa mubairo wemahara airfare yeaviri neane husiku kugara mune inoshamisa Diamond suite pane ese-anosanganisira, yakasarudzika. Royalton Resort muAntigua yakanaka. Iwo ma sweepstakes akatangwa zviri pamutemo panzvimbo iyi munaNovember 29. Iyo yakasarudzika nzvimbo yekutandarira yakavhurwazve ne fanfare uye Royalton chengetedzo-yakavimbiswa protocols munzvimbo panzvimbo zuva re sweepstakes kuvhurwa, mushure mekuvhara munaKurume pakatanga chirwere checoronavirus.
Iwo epamhepo zororo sweepstakes yakavhurika kune vanhu vanopfuura gumi nemasere, vanogara muUnited States of America, United Kingdom, Canada neCaribbean. Kupinda enda ku vangurabi.com. Kupinda kumwe chete kunotenderwa. Iwo ma sweepstakes anomhanya kusvika 11: 59 pm muna Zvita 31, 2020. Iye anokunda achasarudzwa zvisina mutsindo.
Antigua neBarbuda Tourism Authority uye Royalton Antigua Resort uye Spa vachatora vangango famba parwendo rwechokwadi kuburikidza nenzvimbo inonakidza neRoyalton's All-In yakasarudzika yezororo ruzivo, sezvo nhevedzano yezviitiko zvichizoenderera panguva yeiyo sweepstake yekutanga vhiki. Mabasa anosanganisira epawebsite yekutaura paDecember 1 yakanangana nezviitiko zvekuenda pamwe nezvirongwa zvekuchengetedza. Zuva rinotevera pane chaipo kushanya kwechitsuwa, vafambi vanoongorora iyo UNESCO World Heritage Saiti paNelson's Dockyard uye voita zvimwe zvinomira pamberi pekupinda kune inokatyamadza suite yeRoyalton Resort. Uye pakupedzisira, iyo yekudyira anofara awa pati musi waDecember 4 kuRoyalton, icharatidzira hunyanzvi musanganisi achigadzira zvinonaka hunyanzvi hwekudyira uine iyo English Harbor Rum.
Iyo Twitter chat inoitika ne @AntiguaBarbuda pa Twitter, nepo zvimwe zvese zviitiko zvichange zvichirarama zviripo paFacebook ne @AntiguaBarbudaTourism uye pa Zoom. Bhalisa kuti ubatanidze zviitiko zve zoom: Rarama & Tungamira kubva kuAntigua & Barbuda - Iyo Yechokwadi Kushanya uye Iyo Virtual Cocktail Party nekudzvanya paindaneti chinongedzo kana kuemail iyo Antigua neBarbuda Tourism Authority ku: [email inodzivirirwa]
Kuti uwane ruzivo rweAntigua naBarbuda's covid-19 hutano uye chengetedzo protocols yenzvimbo yekushanya, enda ku: vangurabi.com. Vanopfuura zviuru zvina vanobata nezvevashanyi vakadzidziswa uye vakasimbiswa muzvirongwa zvekuenda kune covid-19, padyo nedzimba dzekugara mazana mana nemakumi mashanu dzave kupihwa, uye kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzekudyira dzakashambadzirwa uye mafambiro akavhurwa ebhizinesi.
Vashanyi vanogamuchirwa kutora chikamu muAntigua neBarbuda zviitiko zve2021, zviine zvakawanda zvezviitiko zvikuru zvinobvumidza kureba kwemuviri. Izvi zvinosanganisira Jolly Harbor Valentine's Regatta muna Kukadzi, AUA Rohrman Triathlon munaKurume, iyo Antigua neBarbuda International Kite Mutambo uye Antigua Sailing Svondo muna Kubvumbi, uye Mutambo-wehove Tournament uye Mhanya muParadhiso muna Chivabvu. Kuti uwane ruzivo rwezviitiko zviri kuitika kubva munaNdira - Chikunguru muAntigua neBarbuda enda ku: vangurabi.com
PAMUSORO PEMA ANTIGUA NEBARBUDA TOURISM AUTHORITY
Antigua & Barbuda Tourism Authority ibumbiro repamutemo rakazvipira kuti rizive kugona kweAntigua neBarbuda nekusimudzira nyika mbiri dzepachitsuwa senzvimbo yakasarudzika yevashanyi nechinangwa chekuwedzera vashanyi nekudaro ichipa kukura kwehupfumi. Antigua neBarbuda Tourism Authority inotungamirwa muSt.John's Antigua, uko kushambadzira kwedunhu kunotungamirwa. Chiremera chine mahofisi matatu mhiri kwemakungwa muUnited Kingdom, United States neCanada.
PAMUSORO ANTIGUA NABARBUDA
Antigua (inonzi An-tee'ga) uye Barbuda (Bar-byew'da) iri mukati megungwa reCaribbean. Akavhota iyo World Travel Awards 2015, 2016, 2017 uye 2018 Caribbean Inonyanya Kudiwa Kwokuenda, mapatya-chitsuwa paradhiso inopa vashanyi zviitiko zviviri zvakasiyana zvakasarudzika, tembiricha yakanaka gore rese, nhoroondo yakapfuma, tsika yakasimba, mafaro anonakidza, mibairo yekuhwina mibairo, chikafu chinonwisa mvura uye 365 inoyevedza pingi uye chena-jecha mabhishi - imwe ye mazuva ese egore. Chikuru pane zveLeeward Islands, Antigua ine 108-square mamaira ane nhoroondo yakapfuma uye inoshamisa matopiki ayo anopa akasiyana akasiyana anozivikanwa ekuona nzvimbo. Dockyard yaNelson, iyo yega muenzaniso wakasara wenhare yeGeorgia yakanyorwa nzvimbo yeUNESCO World Heritage saiti, pamwe ndiyo inonyanya kuzivikanwa nzvimbo. Antigua yezvekushanya zviitiko karenda inosanganisira yakakurumbira Antigua Sailing Vhiki, Antigua Classic Yacht Regatta, uye yegore Antigua Carnival; inozivikanwa seCaribbean yeGreatest Summer Festival. Barbuda, chitsuwa chidiki chehanzvadzi yaAntigua, ndiyo yekupedzisira mukurumbira pekuhwanda. Chitsuwa ichi chiri 27 mamaira kuchamhembe-kumabvazuva kweAntigua uye ingori maminetsi gumi nemashanu kutasva ndege. Barbuda inozivikanwa neayo asina kubatika 15 mamaira kutambanuka kwepingi jecha kumahombekombe uye semusha weiyo huru Frigate Bird Sanctuary muWestern Hemisphere. Tsvaga ruzivo nezve Antigua & Barbuda pa: www.chanduraman.com kana kutevera
Dzimwe nhau nezve Antigua neBarbuda